Halyayga Arsenal Ee Robert Pires Oo Saadaaliyay Goolasha Uu Alexandre Lacazette Xili Ciyaareedka Cusub U Dhalin Doono Gunners. - GOOL24.NET
Halyayga Arsenal Ee Robert Pires Oo Saadaaliyay Goolasha Uu Alexandre Lacazette Xili Ciyaareedka Cusub U Dhalin Doono Gunners.
Halyaygii hore ee kooxda Arsenal ee Robert Pires ayaa taageero buuxda u muujiyay gool dhaliyaha Gunners ee Alexandre Lacazette kaas oo seegay koobkii aduunka ee uu xulka qarankiisa France ku soo guulaystay kadib markii uu ku soo bixi waayay liiskii 23 ka ciyaartoy ee Russia kaga qayb galay tartanka ay ku soo guulaysteen.
Pires ayaa saadaaliyay in Alexandre Lacazette uu saamayn fiican ku yeelan doono kooxdiisii hore ee Arsenal isla markaana uu sanad fiican qaadan doono si uu dib ugu soo laabto kooxda xulka qaranka France ee uu koobkii aduunka seegay.
Alexandre Lacazette ayaa xagaagii hore ku soo biiray Arsenal wuxuuna u soo dhaliyay 17 gool inkasta oo ay Arsenal kaalinta lixaad kaga dhamaysatay miiska kala saraynta premier league isla markaana ay seegeen u soo bixitaanka Champions league.
Halyaygii hore ee xulka qaranka France iyo kooxda Arsenal ee Robert Pires ayaa saadaaliya Alexandre Lacazette uu xili ciyaareedka cusub kooxdiisa Gunners uu u dhalin doono ilaa 20 gool isaga oo waliba sheegay in uu saamayn fiicna ku yeealn doono kooxda uu Emery hogaaminayo.
Robert Pires oo ka hadlaya Lacazette ayaa yidhi: “Lacazette waxa uu ciyaartoy muhiim ah u yahay Arsenal. Waxaan filayaa in uu saamayn wayn ku yeelan doono Arsenal isla markaana uu xili ciyaareedkan dhalin doono 15-20 gool”.
Robert Pires ayaa Lacazette ku taageeray in uu qaab ciyaareed joogto ah ku hoos sameeyo Unai Emery wuxuuna yidhi: “Lacazette muhiim ayay u tahay in uu helo deganaansho, sidaa daraadeed, waxaa waajib ku ah in uu la hadlo Emery isla markaana uu ka shaqeeyo halka uu mustaqbalka kaga jiro qorshaha tababaraha”.
Intaa kadib Robert Pires ayaa amaan u soo jeediyay xidiga wadankiisa France iyo kooxdiisii hore ee Arsenal ee Lacazette wuxuuna yidhi: “Isagu waa gool dhaliye fiican, wuxuuna ka niyadjabsanaa in uu seegay kooxdii koobka aduunka, laakiin xaqiiqdii xili ciyaareed fiican ayuu dib ugu soo laaban karaa kooxda sanadkan”.
Alexandre Lacazette ayaa xaalad fiican hadda ku jira isaga oo laba gool ka soo dhaliyay kulankii PSG waxayna Gunners la ciyaari doontaa kooxaha Chelsea iyo Lazio ka hor inta ayna axada soo socota Emirates Stadium ku soo dhawayn kooxda Premier league difaacanaysa ee Manchester City oo ay kooxda Unai Emery xili ciyaareedka cusub ku furan doonto.